people Nepal » अव पशुलाई पनि ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने ! हेर्नुस के के गर्न पाईदैन ? अव पशुलाई पनि ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने ! हेर्नुस के के गर्न पाईदैन ? – people Nepal
अव पशुलाई पनि ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने ! हेर्नुस के के गर्न पाईदैन ?
जेठ १४, काठमाडौं । पशुलाई मानिसले आफूखुसी जति समय पनि काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले बन्देज लगाउने कानुन ल्याएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण निर्देशिका, ०७३ जारी गर्दै पशुलाई अधिकतम ८ घन्टा मात्रै काममा लगाउन पाइने प्रावधान ल्याएको हो ।
निर्देशिकाले बूढो भएको पशुलाई छाडा छोड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा रोकावट गरी उचित व्यवस्थापन, विकास र गुणस्तर कायम गर्न निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुलाई भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने तथा डर, त्रास र तनाव हुन नदिनका लागि निर्देशिका ल्याइएको हो ।
‘भौतिक तथा शीत, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित गर्न र पीडा, घाउचोट र रोगव्याधीबाट सुरक्षित राख्न जरुरी छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निर्देशिकाले घरमा पालेको पशुको जानकारी स्थानीय तहमा रहेको सरकारी निकायमा पशुधनीले दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तोकेको छ । नियमित उपचार गरेर पशुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको पशुधनीले निराकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पशुले काम गरिरहेका वेला मानिसले अक्सर पुच्छर बटार्ने, चोटपटक लाग्ने गरी कुटपिट गर्ने गरेको देख्न पाइन्छ । तर, निर्देशिकाले पुच्छर बटार्ने, भाँच्ने, अंगभंग गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कोर्रा, चक्कु, बन्चरो, पासो, विद्युतीय करेन्ट, खुर्सानीको धुलोलगायतको प्रयोग गरी पीडा दिन नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत क्रियाकलाप गरेर पशुप्रति निर्दयी व्यवहार भएको ठहरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै पशुलाई घाउचोट वा पीडा हुने गरी फाल्सन लगाउने, नाक, पुच्छर, खुट्टा बाँध्ने वा झुन्ड्याउन पनि रोक लगाइएको छ ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।